Atụmatụ 5 iji dọrọ uche gaa na weebụsaịtị | Martech Zone
Nke a nwere ike ịbụ ọkwa na-atọ ọchị nyere eziokwu na blọọgụ m pere mpe na ọgụgụ. Eziokwu bụ na amaara m ihe na-akpata ya, mana enweghị m oge ugbu a itinye ego iji kwụsị ya. Enweghị nchekasị, agbanyeghị, aga m agbanye ya oge adịghị anya!
Na nke ahụ, anọ m na-eche ọtụtụ ihe banyere ụzọ ndị ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike isi mee ka ndị ọgbọ ha nwee atụmanya, atụmanya, na / ma ọ bụ ndị ahịa na weebụ ma m wedara ya ndị a. a ga-ebunye gị n'otu oge, n'otu oge, ma ọ bụ ịnwere ike ịhọrọ ụzọ ị ga-esi aga.
Nwee ọchị - Echere m na m nwere ezigbo ọchị ma ịtụgharị ọchị ahụ na weebụ nwere ike isi ike, ọbụnadị obi ọjọọ. Ọ bụrụ n’ị nwere ike iwepụta ya, ị ga-enwe mmeri.
Dị ịrịba ama - Gwa onye ọ bụla na ị bụ adighi ịde blọgụ ọzọ… Ma soro ya 3 ọzọ posts na nkwaghari na WordPress. Huh? Ee, anaghị m aghọta ya ma ọ mere ka mmadụ niile na-ekwu okwu.
Nwee ọgụgụ isi - Enwere ndụ nwere ọgụgụ isi n'ebe ahụ… Ọbụna na blogosphere. Offọdụ n'ime ndị na-eso ụzọ kachasị na-aga n'ihu saịtị ndị na-enye echiche na-akpali echiche na arụmụka ọgụgụ isi - yana eziokwu iji kwado ya.
Na-agbanwe agbanwe - Ọ bụrụ n ’ị họrọ otu isiokwu, weta ya na-agbanwe agbanwe ma na ngosi na oge. Obere saịtị na-eme nke a, gụnyere nke m. Ọ chọrọ nraranye (ị addictionụ ọgwụ ọjọọ?), Nnọgidesi ike, na ọchịchọ nke ịhapụ ịchụ ma àgwà na oge. Nke ahụ bụ omume siri ike ịgbaso.
Nọ ebe niile - Fọdụ ndị anaghị akwụsị akwụsị na-arụ ọrụ! Ekwenyere m na ọtụtụ n'ime ihe ndị a m nwere na saịtị m bụ site na mkparịta ụka na-aga n'ihu na ntanetị mgbasa ozi ndị ọzọ na blọọgụ na weebụ. Doesntanetị na-akwụghachi ụgwọ ọrụ ogologo oge na ịrụsi ọrụ ike.
Lezienụ ụzọ gị - Ọ bụrụ na ị dị umengwụ, ịnwere ike itinye otu ngwungwu na ọkọlọtọ na Adsense. Ọ bụrụ n’ịbụ ezigbo mma, ị ga - ahụ ụzọ itinye ego na azụmaahịa gị pụrụ iche ma nwekwaa ezigbo ego na itinye ego. A ntị na saịtị ndị ahụ -eme ka ego na-enyekwa nghọta dị ukwuu banyere otu esi emefu ya.
Tags: anyacalacanisntịchọpụtajohn chowrobert scobleshoemoneytechcrunchisiokwu
Sep 17, 2008 na 12: 19 AM
Nke ahụ na-eme isii ọ bụghị ya? Aga m agugharia anya nke oma any
Sep 17, 2008 na 11: 45 AM
Nwere anya dị nkọ, Otir! M gbalịsiri ike ịzụta ụzọ gị dị ka atụmatụ ma gbakwunye ya na nkeji oge. 🙂
Sep 18, 2008 na 7: 54 AM
Daalụ nke ukwuu banyere ndụmọdụ ahụ, ha bara ezigbo uru,
Naanị m chọrọ ịsị na ịde blọgụ maka ego aghọwo ihe siri ike n'oge a n'ihi na usoro aghụghọ ochie anaghị arụ ọrụ maka m.
Daalụ maka ịkọrọ anyị ndụmọdụ ndị a (yana imges dị mma).
Sep 19, 2008 na 9: 43 AM
hey, M ọchị!. Ma m maara ihe ma na-agbanwe agbanwe. Ma mgbe m na-anọghị ebe niile, m nọ ebe. Yabụ 3.5 n’ime 6 adịghị mma nke ukwuu.
Enwere m ike agaghị anwa ịde blọgụ maka ego, ọkachasị n'ihi na achọghị m itinye oge na mbọ n'ime ya. Aga m eji blọgụ m ree akwụkwọ m n'agbanyeghị, mgbe ọ bụla m nwere ike bipụta ihe ogbi ahụ.